Dawladda Ugu Weyn Wixii La Isku Odhan Jiray Somali Republic- Somaliland. | Hangool News
Dawladda Ugu Weyn Wixii La Isku Odhan Jiray Somali Republic- Somaliland.
October 6, 2017 - Written by Hangool
1960 waxaa Somaliland laga abuuray in Somali-weyn wax la yidhaa laga sameeyo geeska Afrika laga abuuro, waxaana dadaalka noocaa ahaa qaybta ugu weyn soo qaatay dhulkii iyo ummaddii la odhan jiray jiray Somaliland ee magaalo madaxda u ahayd Hargeysi. Somaliweyntu waxay shantii dhul ee dadka somalidu degi jireen ee la kala odhan jiray Somaliland,Somalia, Djibouti, Eastern Ethiopia ,and NFD.
Waqtigaa Somalilandbaa hogaaminaysay gobonimadoonka iyo Radio Hargeysa iyo hirarka gaaban, waxaa waqtigaa Somaliland ku guulaystay inay isku darto Somaliland iyo Somalia oo markii la isku daray magac cusub la baxay oo ahaa Somali Republic. Seddexdii kale gumaystihii ayaa ku guulaystay inuu NFD Kenya ku daro, Djabouti
ay France la joogto tan iyo 1977kii iyo Ethiopia oo 1882gii ka mid ahayd Barlin Conference kii gumaystuhu dunida ku qaybsanayey oo qayb loo siiyey Esstern Ethiopia oo dhul Somaliyi leedahay ah.
Waxaa kuu cad in labadii la isku daray in keligii taliyihii Moxamed Siyaad Barre ay xukuumadiisii burburisay Somali Republic. Burburkii waxaa ka dhashay dagaalo sokeeye iyo kala yaac iyo nin walba in uu gobolkiisii ku noqdo si in uun u badbaado. Waxaa ka dhashay in 18May 1991 Somaliland isku darkii labada dal ka baxday oo ku dhawaaqday xukuumad Somaliland u gaara wax dambena isugu jirin Somalia waxa la yidhaa. (Fruits) ugu weyn ee arinkaa ka heshay wuxuu noqday horta in dagaaladii iyo rabshadihii inay hangool bira iskaga qabatay oo Dhibaatadii iyo dagaaladii sokeeye Garawe soo dhaafi waayeen. Waxaa kaloo samaysatay xukuumad dhaqaaleheedu ku filanyey oo doorashooyin iyo kala dambeyni ka muuqato oo nabad ku seexatoo ku soo toosta iyadoo wadankii Somalia la odhan jiray dagaalo iyo dhimasho aan dheg la qabto lahayni ka socdaan.
Dawladii gumaysiga ahaan jiray way ku soo noqdeen ciidomo bay ku soo gureen way iska maamusheen intaasoo maamul oo mid walba ay sigaara u sameeyeen bay ka dhigeen si aanay weligood u heshiin dhaqaalena usamaysan ee iyagu sidii xaas la qabo u masruufaan iskun diraan.
Somaliland iyadoo meel wacan maraysa Silaanyo iyo Xusbigiisii Kulmiye yimaadeen runtii Somaliland maqaam hoose oo aad u liita bay u celiyeen oo halkii dadkan saboolka ahi institutions ay wada leeyihiin loo kordhin lahaa baa intii yarayd ee hantida guud ahayd iyo Dekedii iyo madaradii qaatee qaado iyo xaraash lagula kacay. Intaa dhibtu kuma joogsane wuxuu Silaanyo soo ciyaarsiiyey calancastii seddexdii madaxweyne horeba wadanka ka ilaaliyeen oo ah askar dagaaladii wax ugu soo dhinmeen oo Xusbigii Kulmiye ku wareejiyey. Maanta haddii calancasdaa dagaal ogayaasha ahi talada wadanka uu siilaanyo u gacan geliyo dawlad sii socon kartaa ma jirto. Muse Biixina wadan ma hogaamin karo waa dagaal ooge.
Somaliland maanta waa dawladda qudha ee somali dhulalkeeda ka jirta marka Djibouti laga reebo ee muujisay nabad dhexdeeda ah iyo dhaqaale iyo is xukun madax banaan laakiin Xukuumaddii kulmiye wadankii meel hoose ayey geysay.